Ma og tahay inay laba kala duwan yihiiin, Hogaamiye iyo Madaxweyne; Maanta oo kale waa maalintii loo baahnaa Hogaamiye. | ToggaHerer
← Daawo : “Waxa Inankayga Lagu Haystaa Maxaad u gashay Waddani Adiga oo Habar Awal ah, Muslim kuma Cabiidsamo Walow Madaxa Kaa Goyn“ Aabaha Dhalay Maxamed Sidiiq Dhamme oo Ciidamada Boolisku Xidheen
Daawo: Muxaadaradii ” Sabirka iyo Yaqiinta” Fadiilatu Sh. Mohamed Idiris iyo Maalintii Labaad ee Mutamarka Islaamiga ah Ee 15 aad ee Magaalada Oslo →
Ma og tahay inay laba kala duwan yihiiin, Hogaamiye iyo Madaxweyne; Maanta oo kale waa maalintii loo baahnaa Hogaamiye.
Published on April 21, 2017 by Magan
Sifooyinka Hogaamiyahu leeyahay waxaa ka mid ah:
Kursigu maaha halka uu u socdo
Hogaamiyuha, kursigu waxaa u yahay dariiq uu u maro is bedelo uu rabo inuu sameeyo oo isaga maankiisa ka guuxaya, kuwaas oo aanu cidna la wadaagin, qof na kala sheekaysan.
Is bedeladaasi uu rabo inuu sameeyo majirto wax dabar ah ama sharci ah oo uu kaga joogsadaa. waxaa ka go’an inuu xaqiijiyo Ujeedooyin maankiisa gadhoodha oo uu u ciil qabo inuu fulintooda.
Hanti uu urursado iyo daaro uu dhisto lagama dhaxlo
Hogaamiyuhu, waxaa uu aaminsan yahay, in aanu jirin sharaf ka weyn in uu ummad Hogaamiyaa, Magac na intaasaa ugu filan lagama yaabo Hogaamiyuha in laga dhaxlo wax aduun ah ama daaro ah oo uu leeyahay.
Dadka uu hogaaminayaa uma kala dhawa, mana kala xigaan.
Hogaamiyhu, waxaa uu aamin san yahay, inta uu hogaamiyaha u yahay ee dal iyo dadba leh inay yihiin caruur uu dhalay oo kale, cidda ay dadka isugu dhaw yihiin waa kuwa uu is leeyahay waxay kugu kaalmaynayaan xaqiijinta ujeedooyinkaaga, malaha Qabiil u gaar iyo tol uga sokeeya ummaada inteeda kale.
Dastuur ma qabto
Hogaamiyaha ma qabto sharci isaga ka horeeyay oo uu u arko inuu carqalad ku yahay Himilooyinkiisa, dhan uu uga wareegaba waxaa samaystaa Qiil uu ku banaysto xaqiijnta Ujeedooyinkiisa. Maadaama uu ku qancay in waxaasi dan u yihiin ummaddaa uu hogaaminayo.
Waxyaalo waa hore meelo lagu xariiqay kama hor istaagaan rabitaankiisa.
Xilliayda adag ayuu go’aamo adaga qaataa.
Marka ay u daran tahay ee Abaaro, Colaado, Cuduro, iyo Dhibaatooyin kale jiraan ayuu qaataa go’aamada ugu adag, waana siyaabaha lagu garto inuu Hogaamiye yahay,
Danta dalkiisa iyo dadkiisa cid kale uguma Habrado
Hogaamiyahu, is bedelka uu rabo inuu xaqiiijiyo, cid u ku raali geliyaa majirto oo aan ahayn danta dalkiisa iyo dadkiisa, taasaana u ah khadka cas ee aan saaxiib iyo sokeeye midna ka soo gudbi karin.
Hogaamiyhu inta badan waa da’ dhexaad ( 35 ilaa 55 jir )
Hogaamiyaashii adduunkan soo maray 95 % waxay ahaayeen da’daa aan sheegay
Soddonkii sanno ee ina dhaafay Afrika waxaa ka soo baxay Madax la odhan karo waxay ahaayeen Hogaamiyaal ka aragti sarreeya Madaxweynayaasha.
Isku day hadaba in aad sheegto mid ama laba ka mid ah Hogaamiyaashii ka soo baxay Afrika, sabab ?